महिनावारीमा सेक्स गर्न मिल्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
महिनावारीमा सेक्स गर्न मिल्छ ?
धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावारी अर्थात मिन्स भएको बेला यौन सम्पर्क (सेक्स) गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने दुविधा भएको पाइन्छ । यसको कारण हो महिनावारीको वैज्ञानिक कारणबार यथेष्ट जानकारी नहुनु ।
तर यसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले भने फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले गरेको अधययन अनुसार महिनावारीमा यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ । यधपी, यसबारेमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
अरु वेलाका जस्तो नभइ महिनावारीमा यौन सम्र्पक गर्दा अनिवार्य रुपमा कन्डम लगाउनु पर्छ । जसका कारण यौन सम्पर्क गर्दा संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । र कसैलाई घिनाउने हुनसक्छ त्यसका लागि पनि यो राम्रो हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस १२ वर्षीया बालिकाले महिनावारीबारे यसरी गरिन मनछुने कुरा (भिडियोसहित)
उनीहरुले भनेका छन् । यो व्यक्तिगत इच्छामा पनि भर पर्ने कुरा हो । कसैलाई महिनावारी भएको बेला सम्भोग गर्ने मन हुन्छ भने कसैलाई हुँदैन ।
तर, हाम्रो समाजको चलनचल्तीको कुरा गर्ने हो भने महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन, परम्परागत भाषामा नछुने भएको सम्म भनिन्छ । महिनावारी भएका बेला यौन सम्पर्क गर्न नहुने भन्ने कुनै बैज्ञानिक तथ्य भने छैन ।
याे पनि पढ्नुस १० वर्षमै महिनावारी हुने बालिकाको संख्या बढ्दो, कारण यस्तो छ
महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्दा, चरमसुखको बेला पाठेघरमा कन्ट्रयाक्सन हुन्छ, जसले गर्दा, सम्भोगपछि अरु पदार्थसहित रगत अलि बढी बग्नसक्छ । र महिनावारीको समयावधिलाई पनि कम गर्छ ।
तसर्थ महिनावारी हुदा सुरक्षित तरिकाले यौन सम्पर्क गर्दा कुनै हानी नहुने चिकित्सकको राय रहेको छ ।
ट्याग्स: महिनावारी, सेक्स